काठमाडौं : कांग्रेस र कोइराला परिवार परिपूरकजस्तै थियो सुशील कोइराला सभापति छँदासम्म। १३ औं महाधिवेशनको संघारमा सुशीलको निधन भएपछि कोइराला परिवार मूल नेतृत्वबाट बाहिरियो। उनीहरूले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा समर्थन गरेका थिए। पौडेल समूहबाट महामन्त्रीमा डा. शशांक कोइराला निर्वाचित भए। डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए।
फाउन्डेनको ब्यानरमा सामूहिक रूपमा प्रकट भएकै समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई चुनौती महसुस गरे। स्थानीय नेता÷कार्यकर्तासँग देउवाले अन्तक्र्रिया गरे। उनले वीरगन्जमा वंशवादको विरोध गरे। फाउन्डेसनको संगठन सातै प्रदेशका ७७ जिल्लामा विस्तार भएको छ। सबै तहका संरचनामा महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो संगठन अन्य पाँच मुलुकमा विस्तार भएको छ।
फाउन्डेसनको ब्यानरमा लगातार कार्यक्रम हुन थालेपछि देउवानिकट केन्द्रीय सदस्यले अघिल्लो बैठकमा प्रश्न पनि गरेका थिए। २२ असारमा सुरु बैठकमा नेतृ सुजाताले ती सदस्यको जिज्ञासा मत्थर पार्दै भनिन्, ‘फाउन्डेसन पूर्णरूपमा गैरराजनीतिक संगठन हो। सभापतिसहित पार्टीका सार्थीहरूले यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। दलभित्र देखिएझैं गुटबन्दी कोइराला परिवारले गर्दैन।’ आफूहरूले पार्टी राम्रो होस् भन्ने विषयमा छलफल गर्ने गरेको उनले बताइन्। भनिन्, ‘हामी महाधिवेशन आएपछि मात्र नेतृत्वबारे दाबी गर्नेछौं। दलभित्र एजेन्डै प्रवेश भएपछि आन्तरिक छलफल नहुने भन्ने छैन। अहिले नै नेतृत्वका विषयमा निर्णय गर्दैनांै।’
उनले पार्टीमा कोहीलक्षित गुटबन्दी नगरेको अन्नपूर्णसँग बताइन्। समग्रमा आफूहरू पार्टीलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेको उनले बताइन्। ‘जेपी फाउन्डेसनबाट कुनै पक्ष विचिलित हुनुपर्दैन’, उनले भनिन्, ‘यसले आफ्नो तरिकारले कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो सामाजिक कार्यमा सक्रिय संस्था हो।’ सुजाताले पार्टी नेतृत्व र १४ औं महाधिवेशनबारे बोल्न चाहिनन्। शशांक निवासमा भएको लन्च मिटिङमा फाउन्डेसनको ३ नम्बर प्रदेश संयोजक रीता खनाललगायतको उपस्थिति थियो। खनाल महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।
शेखरका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले तीनै नेता केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेकाले भेटघाटमा पार्टीबारे छलफल हुनु स्वाभाविक भएको बताए। केन्द्रीय बैठक सुरु भएको र त्यसमा महाधिवेशनको एजेन्डा प्रस्तुत भएकाले पछिल्लो लन्च बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको उनले स्वीकार गरे।
महामन्त्री शशांक पार्टी संस्थापक बीपी कोइरालाका कनिष्ठ पुत्र हुन्। सुजाता पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री हुन्। डा. शेखर कोइराला परिवारमा निरन्तर क्रियाशील केशव कोइरालाका छोरा हुन्। कांग्रेसमा कोइराला परिवारको विरासत फर्काउन पछिल्लो समय कोइराला परिवारका सदस्य शशांक, शेखर र सुजाता सक्रिय छन्। शशांकले गुटबन्दी अन्त्य गर्न जोड दिने गरेका छन्। शेखरले जिल्ला दौडाहामा सक्रिय रहँदै पार्टी सभापति देउवाको कडा आलोचकको पहिचान बनाएका छन्। सुजाता भने फाउन्डेसनको संगठन विस्तारमा छिन्। उनीहरूले सभापति देउवाबाहेक अन्य नेता एक हुन् भन्ने सन्देश फाउन्डेसनमार्फत दिन थालेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलदेखि नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीलगायत पनि फाउन्डेसनको मञ्चमा देखिएका छन्। (अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट)
२०७६ श्रावण ४ शनिबार ०६:५६:०० मा प्रकाशित